Bar Internet oo islaami ah oo lagu soo kordhinayo baraha bulshadu ay ku kulanto - Halbeeg News
in Tiknolojiyad, War Degdeg
Bar Internet oo islaami ah oo lagu soo kordhinayo baraha bulshadu ay ku kulanto, xuquuqda sawika Halbeeg.com
KUALA LUMPUR(HALBEEG)-Salaamweb waxa ay ka shaqeyneysaa in ay abuurto bar cusub oo loogu magac darayo Xalaal Web waxaana loogu tala galay in ay dadka Muslimiinta ah ku sheekeystaan kana daalacdaan warbixinada wargeysyada caalamka si waafaqsan shareecada islaamka.
Muslimiin badan ayaa barahan bulshada casriga ah waxaa ay si adag ugu sifeeyaan in yihiin kuwa moralka islaamka dhaawacaya. Tani wax ay aad u dhaawaceysaa dadka muslimiinta ah ee uu mamnuuc ka yahay bogagga lagu ciyaaro qamaarka iyo dabaal dagyada goobaha khamriga lagu cabayo waana halkan meesha uu web-kan cusub doonayo in uu ka faaiideysto waxa uuna hadafku yahay in xitaa ugu yaraan 10% muslimiinta dunida oo gaaraya 1.8 bilyan ay isticmaalaan webka.
“Wax aanu dooneynaa in aan ka dhigno internet-ka meel aad u wanaagsan,” ayuu yiri maareyaha guud ee mashruucan Xasani Zarina Maxamed sida ay baahisay Bloombreg “Waan ognahay Internet-ku waxa uu leeyahay dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xun, Salaamweb waxaa uu kuu abuurayaa dariishad cusub oo aad ka arki karto dhinaca hagaagsan ee uu internet-ku leeyahay,” ayuu sii raaciyay.
Barnaamijkan cusub waxa uu leeyahay dhowr nooc oo mid walba soo bandhigayo qaab nololeedka islaamka waxaana kamid ah goorsheegto ku xasuusinaya xiliyada salaadaa, jiheeye kuu tilmaamaya magaalada Maka iyo shaandhe kaa soocaya cuntooyinka uu ku jiro hilibka doofaarka iyo alkoolada.
Si kastaba ha ahaatee barnaamijkan kaliya looguma tala gelin muslimiinta ee waxaa isticmaali kara dad aan muslimiin aheyn balse ma ogolaanayo in lagu dhex faafiyo waxyaabaha aanay diinta islaamka ogoleyn.
Maadaama shirkada Google iyo Facebook ay dhex fadhiiyaan fadeexooyin la xiriira dhanka khusuusiyaadka iyo keydinta xogahah iyo macluumaadka macaamiisha. Waxaa aad loogu baahday barnaamijyo gacan saddexaad ah oo aad u buuxiya waxyaabaha ay ku fashilmeen shirkadihii hore.
Madaxweynaha Jabuuti oo sheegay in Soomaaliya ay la wareegi karto ammaanka dalkeeda